Qaybta 1. Sida loo ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo daaqadaha 10
Qaybta 2. Sidee waa waayo-aragnimo ka ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo daaqadaha 10?
Qaybta 3. What`s dheeraad ah ay ka sugayaan
Waayo, kulli ciyaarta ku caashaqi jiray waxaa ugu danbeyn waa war wanaagsan. Madaxweyne Siilaanyo Oo mid ka mid ah kulan si fudud loo ciyaaray kara daaqadaha 10 iyadoo la kaashanayo hal codsi universal oo uu soo biiriyay daaqadaha 10. Qaybta wanaagsan oo dhan waa in ay ma ahan oo kaliya Console ciyaaraha hadda sida iyadoo la kaashanayo ku dhisay GameDVR user ayaa sidoo kale awood u yeelan doonaan inay sii qulquli kulan ay ka gaareen TC aan ka kaaftoomi kasta. Terry Myerson guddoomiye ku xigeenka maamulka sare ee OS Microsoft ay ku dhawaaqday intii lagu jiray mudaaharaad ay daaqadaha 10 in user awood u yeelan doonaan in ay helaan dhammaan qaababka hal codsiga marka ay timaado Madaxweyne Siilaanyo Oo sida madal ay is-dhexgalka cross ayaa sidoo kale xaqiijiyey in user ka helo ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira, marka ay timaado ciyaaro fudud oo ku qanacsan. Si aad u sharax in dadka isticmaala aynu qaadano tusaalaha ah Skype iyo xusay barnaamijkan arrinta ayaa la waayay sida user hadda fahmi doonaa in waxa codsiyada universal yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan. Waxaa shaki la'aan waa Liibaan weyn marka ay timaado ah ayaa isagana ka iyo horumarinta ciyaarta si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo keliya ma aha, laakiin kulan ayaa waxaa sidoo kale huleeshay u dhufto ee kale ee la taageeray codsiga Madaxweyne Siilaanyo Oo by. Ayaa shaqada iyo dibad ee codsiga waa kan ugu fiican, laakiin nasiib darro shirkadda ayaa sidoo kale qirtay in codsiga Madaxweyne Siilaanyo Oo waxaa laga yaabaa in waayo-aragnimo yar marka la barbar dhigo Console ciyaaraha in la og yahay in dadka isticmaala laakiin faahfaahinta buuxda oo aan weli shaaca ka qaaday in. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa inay sii soco ilaa daaqadaha ayaa la bilaabay in la hubiyo in waayo-aragnimo user la wanaajiyey. Waxaa lagula talinayaa in ay daawadaan demo Madaxweyne Siilaanyo ee URL https://www.youtube.com/watch?v=zvwHiwC5g7c wixii macluumaad dheeraad ah.
Sida faahfaahinta buuxda oo aan weli shaaca ka qaaday sidaa daraadeed waxa aad u hore uu wax ka qoro waayo-aragnimo ah in user in la helo iyadoo la ciyaaro Madaxweyne Siilaanyo Oo on Windows 10 kastaba ha ahaatee habka buuxda ayaa shaaca ka qaaday shirkadda oo ay aragti waa ma aha oo kaliya user fudud, laakiin waxay sidoo kale ka heli doontaa war layaab leh in weli ay u soo arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay diiradda saaraan habka ay u ciyaaro ee Madaxweyne Siilaanyo mid daaqadaha 10. Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira.
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.xbox.com/en-US/windows-10 loo kala helo iyo profile Madaxweyne Siilaanyo la abuuray adigoo gujinaya calaamada in button ee geeska midig sare si aad u hesho waayo-aragnimo user kama dambaysta ah. Ka hor inta oo dhan waxay tani waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in daaqadaha 10 waxa lagu xiraa gal nidaamka.
2. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in la eego waa la aqbalay in ay sii wadi:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in badhanka OK waxaa riixi si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
4. app dajinta Madaxweyne Siilaanyo Oo markaas bilaabi doonaa haddii daaqadaha 10 Falanqeynta farsamo ayaa lagu rakibay horay user in ay raacaan Dardar si loo hubiyo in codsiga la geliyo. Marka waxa la bilaabay user awood u yeelan doonaan in ay arkaan wax interface sida soo socota:
5. kulan aan tab waa wadnaha app Madaxweyne Siilaanyo iyo sabab la mid ah waa in la riixi si loo hubiyo in kulan laga ciyaari doono qalab kasta oo waxaa lagu muujiyey qaab ka mid ah liiska:
6. ciyaarta ayaa ay tahay in la ciyaaray waa in la riixi si loo hubiyo in uusan bilaaban kulanka iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
Codsiga is-dhexgalka Madaxweyne Siilaanyo ayaa xaqiijiyey in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado ciyaaraha ku daaqadaha 10. Waxaa dareemayaa codsiga Madaxweyne Siilaanyo Oo waxaa qayb ka mid ah xudunta u ah deegaanka ciyaaraha daaqadaha 10 iyo sidoo kale Console ah marka ay timaado hoorto ciyaarta ka badan TV ama PC sida doorashada. Falanqeynta farsamada ee ciyaarta waa buggy iyo waqtiga oo dhan sida shirkaddu waa in la hubiyo in dhismayaasha cusub lagu daray bidbidayaan laakiin marka ay timaado waayo-aragnimo ciyaaraha ee Windows 10 ka dibna mid ka mid sheey aan hubo ayaa waxay tahay in user ka dhigi kara isticmaalka ugu wanaagsan mid ah qaababka iyo sidoo kale hubin karaa in in waayo-aragnimo waa cajiib laga cabsado. Inta lagu daah-iyo play ciyaarta ku app Madaxweyne Siilaanyo ee ma jirto nidaamka shil ama OS cayayaanka oo uu soo kulmeen iyo waxa oo dhan ayaa si guul leh loo baaro ay ku rakibidda ka OS Windows 10 oo ku saabsan baabuur sare adag sida u isticmaalaya sida OS weyn hadda laguma talinayo at dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in codsiga la baaraa hoorto iyo sidoo kale tab la xidhiidha waxa uu ku yaalaa in guddi bidix midig hoose.
Gamer kasta oo mustaqbalka weeraryahanka codsiga Madaxweyne Siilaanyo Oo sida mid ka mid ah lagu daro ugu wanaagsan ee OS in loo abuuray shirkadda eegi kartaa. Sida codsiga aan la bilaabay oo shaaca ka qaaday in si buuxda si u tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in ay daro ka dib markii loo sameeyay in ay codsiga in mustaqbalka la sameeyo:
1. clips Ciyaarta ayaa la duubi doono iyo user inay hubiyaan in codsiga waxaa loo isticmaalaa si ay u wadaagaan clips ah saaxiibada iyo malaha warbaahinta ugu isticmaalay ku dhufto ee dunida ka dhigi kara.
2. play madal cross ayaa sidoo kale ballan qaaday shirkadda iyo waxa loo isticmaali doonaa in lagu dheelo ciyaaraha ka dhanka ah dadka kuwaasi oo horeba on hal Madaxweyne Siilaanyo Oo ciyaaro.
3. Codsiga Smart Glass la og yahay in dadka oo dhan kuwaas oo la isticmaalayo Madaxweyne Siilaanyo iyo mustaqbalka codsigan uu noqon doonaa mid qayb joogto ah interface sida ugu mid ah qaababka ay horeba u gundhig gudahood codsiga ka.
> Resource > Windows > Play kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo on Windows 10 Computer